Gen. Siciid dheere oo musharixiinta Puntland ugu baaqay in aysan hub la imaan Garoowe (Dhegeyso) – Radio Daljir
Gen. Siciid dheere oo musharixiinta Puntland ugu baaqay in aysan hub la imaan Garoowe (Dhegeyso)
Diseembar 5, 2013 5:45 b 0
Garoowe, December 5, 2013 – Taliyaha howl-galka xilliga doorashooyinka Puntland ee dhinaca amniga ahna taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland Gen. Siciid Maxamed Xirsi (siciid dheere) ayaa maanta markii ugu horaysay ka hadlay qorshahooda iyo sida wax u socdaan.
Taliyaha ayaa shirka jaraa?id waxaa uu kaga hadlay arrimaha amniga iyo nabadgelyada xilliga doorashooyinka Puntland. ?musharixiinta waxaan u sheegaynaa in aan hub lala soo geli karin magaalada xilliga doorashada.? Ayuu yiri Gen. dheere
Waxaa uu musharaxiinta ugu baaqay inay ku kalsoonaadaan ciidanaka amniga Puntland, sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inaan la ogolaan doonin gaadiid dagaal in lala soo galo magaalada Garoowe xilliga doorashada iyo inta ka horaysa ee lagu jiro ololaha.
?Musharixiinta intooda badan waan kala hadlay arrimaha nabadgelyadooda iyo ciidanka ilaaladooda ah.? Ayuu yiri Gen. Siciid oo musharixiinta mar kale ugu celiyey in ay kalsooni buuxda ku qabaan ciidanka Puntland iyo hanaanka loo qorsheeyey amaanka wakhtiga doorashada.
Musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Puntland ayaa cabasho xoog leh qaarkood ka muujiyey illaalinta amnigooda inta ay ku jiraan tartanka, qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa wata ciidamo iyo gaadiid dagaal, in kastoo horay loogu baaqay in aan hub lala soo geli karin magaalada.
Dhegeyso:- shir jaraa?id oo uu Garoowe ku qabtay Gen. Siciid Maxamed Xirsi (Siciid dheere)
RW Saacid ?Inaan si fuhan u aqbalno go?aanka baarlamanka taariikh ayey noo tahay.? (Dhegeyso)
Col. Mudan ?Dhimashada 8-deed ruux oo 3 ciidan tahay ayaa qaraxu sababay 37-na waa dhaawac?